Matipi mashanu Ekumusoro emaAgency Ari kutsvaga Kuvaka Nyowani Yemari Inodzika mune Dambudziko | Martech Zone
Mugovera, June 6, 2020 Mugovera, June 6, 2020 Todd Johnson
Nemapoka ekushambadzira achifanirwa kumanikidza kumbomira uye kutsanangura patsva mazano avo e2020, zvakanaka kutaura kuti kwave paine mukana wakanaka wenyonganiso nekuvhiringidzika muindasitiri.
Dambudziko repakati rinoramba rakafanana. Iwe unobatana sei nevanhu kuti uchengete kuvimbika uye uwane vatengi vatsva? Izvo zvachinja zvachose, zvisinei, inzira uye nzira dzekusvika pavari.
Izvi zvinogadzira mukana kumakambani anononoka kutora mukana. Heano matipi mashanu kune avo vari kutarisa pivot muchiedza checoronavirus denda.
muromo 1: Gadza Vashandi Pfungwa
Izvo zvese zvakanaka uye zvakanaka kuva neshuwiro huru kumusoro kwesangano, asi izvi zvinofanirwa kupihwa pasi mukati mevashandi vese kukurudzira vese vashandi kuti vagovane chiono chitsva chekambani. Yange iri nguva yekupwanya yevashandi, nekudaro kuona kuti vanonzwisisa kuti sei kambani iri kugadzirisa mashandiro ayo akakosha. Izvi zvinopa simba vashandi kuti vaone mikana munzvimbo dzese dzevatengi, ichigadzira mari nyowani yesangano.
Zano 2: Kugadzira Dambudziko Kugadzirisa
Ichi ndicho chinhu icho vese vashandi vehurumende vachasvetukira pairi. Zvirongwa zvakanaka zvekugadzira zvese zvine chekuita nekugadzirisa matambudziko - uye mabhizinesi kazhinji haana kusangana nematambudziko akakura kupfuura zvaari izvozvi. Iko kugona kuona zvinhu neimwe nzira uye kuratidza mazano matsva ndeimwe yemisangano mikuru yemasangano ekugadzira, uye haina kumbobvira yave yakanyanya kukosha.
Zano 3: Re-shandisa Zvemukati
Mabhajeti ari, mune dzakawanda zviitiko, anogona kutambanudzwa kweinenge yasara yegore remari. Mune zvimwe zviitiko, mari yakawanda muzvinhu zvakaita semisangano uye kuratidzira inogona kunge yakatambiswa, kune vamwe, inofanira kukurumidza kugoverwa kuchengetedza simba. Kuendesa izvi kunzvimbo yemadhijitari kunouya nezvakanaka, iko kushandiswa zvakare kwemukati. Kubata madhijitari senge zviitiko zvepamhepo kana webinar zvinopa rukova rwezvinhu zvinogona kushandiswa nguva nenguva. Nekupa zvemukati pane dzakawanda chiteshi, izvi zvinokurudzira kwechokwadi akawanda-chiteshi mishandirapamwe.
Zano 4: Gadzira iyo Mundane, Inonakidza
Zviitiko zveDhijitari muenzaniso wakanaka wezano iro, kana rikamhanyiswa, rinogona kukuvadza mukurumbira wechiratidzo. Iko kufungidzira kungave kuti sarudzo yega ndeyekuronga bland, kunze kwebhokisi webinar, semuenzaniso, kuenda pamberi pevatengi. Nekuda kweizvozvo, chero mhando yekuita munhu kana hunyanzvi hunopihwa. Nepo kutarisana-ne-kumeso kusangana kuri kuitiswa, izvo hazvireve kuti chiitiko chakasarudzika hachigone kuendeswa Kukurudzira pfungwa yekugadzira kunoratidza kune vatengi kuti unokwanisa kugadzirisa nyaya hombe, dzino simbisa hukama uye nekuona hupenyu hurefu.
Zano 5: Enda Kumberi kweVatengi
Hakuzovi nekambani isina kukanganiswa neimwe nzira nechirwere checoronavirus. Kutaura kune vatengi uye nekunzwisisa kuti Covid-19 yakachinja sei nzira yavo yekushambadzira pasina mubvunzo ichavhura hupfumi hwemikana yekuisa mimwe mikana yavanogona kunge vasina kumbofunga nezvayo.
Isu takaona chekutanga ruoko rwekuda kwevatengi kugamuchira nzira nyowani dzekufunga kugadzirisa matambudziko avakatarisana nawo izvozvi. Nekutora isingagone, yekugadzira nzira kune manejimendi manejimendi, pane mukana wakakwana wekusimbisa hukama hwevatengi uye kuhwina bhizinesi idzva.
Tags: bokagutsikanadambudzikodhizaini yekugadziralockdownMindset
Todd Johnson ndiye director account yeEmerald Colour, ane makore anopfuura gumi ane ruzivo mune zvekugadzira, dhizaini uye anodhinda maindasitiri. Akwezva makuru emunyika uye epasi rese mabhenji kuEmerald Ruvara rosta inoramba ichitungamira kukura kwesangano.